Nhau - MuSweden, hydrogen yanga ichishandiswa kupisa simbi nechinangwa chekusimudzira kuenderera
Makambani maviri akaedza kushandiswa kwehydrogen kupisa simbi panzvimbo iri muSweden, danho rinogona kuzopedzisira robatsira kuita kuti indasitiri igare yakasimba.
Pakutanga svondo rino Ovako, uyo ane hunyanzvi mukugadzira imwe simbi inonzi injinjini yesimbi, akati yakabatana neLinde Gas pachirongwa ichi paHofors rolling mill.
Zvekutongwa, hydrogen yaishandiswa semafuta ekugadzira kupisa panzvimbo peyakaiswa peturu yegesi. Ovako akatsvaga kuratidza kukosha kwezvakatipoteredza pakushandisa hydrogen mukuita kwemoto, achicherekedza kuti kungobuda chete kwakaburitsa mweya wemvura.
"Uku kukurudzira kukuru kune indasitiri yesimbi," akadaro Göran Nyström, mutevedzeri wemutungamiri weOvako weboka rekushambadzira uye tekinoroji.
"Inguva yekutanga iyo hydrogen yashandiswa kupisa simbi munzvimbo iripo yekugadzira," akawedzera.
"Nekuda kwekuyedzwa, tinoziva kuti hydrogen inogona kushandiswa zvakapusa uye zvisingachinjiki, pasina chinokanganisa mhando yesimbi, izvo zvinogona kureva kudzikiswa kukuru kwazvo mukabhoni."
Sezvo nezvakawanda zvikamu zveindasitiri, indasitiri yesimbi ine chakakanganisa zvakanyanya nharaunda. Sekureva kwesangano reWorld Steel Association, paavhareji, matani 1.85 eakabhoni dhayokisaidhi akaburitswa metric imwe yesimbi yakaburitswa muna 2018. Sangano reInternational Energy Agency rakatsanangura chikamu chesimbi se "chinovimba zvikuru nemarasha, icho chinopa 75% simba rinodiwa. ”
European Commission yakatsanangura hydrogen seyinotakura magetsi ine "simba rakawanda rekuchenesa, simba rinoshanda munzvimbo dzakamira, dzinotakurika uye dzekufambisa."
Nepo hydrogen pasina mubvunzo iine kugona, kune mamwe matambudziko kana zvasvika pakuigadzira.
Sekuona kwakaita Dhipatimendi reMagetsi reUS, hydrogen haiwanzo "kuvapo yoga muzvisikwa" uye inoda kugadzirwa kubva kumakemikari ane iyo.
Zvinyorwa zvinoverengeka - kubva kumafuta ezuva uye zuva, kusvika kune geothermal - zvinogona kuburitsa hydrogen. Kana zviwanikwa zvinowanikwazve zvichishandiswa mukugadzirwa kwayo, inonzi "green hydrogen."
Nepo mutengo uchiri kunetsekana, makore mashoma apfuura aona hydrogen ichishandiswa munzvimbo dzinoverengeka dzekutakura senge zvitima, mota nemabhazi.
Mumuenzaniso uchangoburwa wemakambani makuru ekufambisa anotora matanho ekusundira tekinoroji kupinda mukati, Volvo Group neDaimler Truck nguva pfupi yadarika vakazivisa hurongwa hwekushandira pamwe kwakanangana nehydrogen peturu-cell technology.
Iwo mafemu maviri akati aumba 50/50 mubatanidzwa, vachitarisira "kugadzira, kugadzira uye kushambadzira masisitimu emafuta emafuta anorema uye mamwe mashandisiro."